VaMugabe Vanoti Hapasati Pava neMunhu Achatora Chigaro Chavo muZanu PF
Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, vanoti vachapinda zvakare musarudzo vakamirira bato ravo, sezvo kusina mumwe munhu anga kwikwidza akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika.
VaMugabe, avo vari kusvitsa makore makumi masere nemasere ekuberekwa neChipiri, vakaudza bepanhau reThe Sunday Mail kuti vese mubato ravo vari kuda kuti ivo vamirire bato musarudzo, uye hapana munhu mubato ravo ari kuumbiridzwa kuti azove mutungamiri mutsva kana ivo vaenda pamudyandigere.
VaMugabe vanotiwo havatarisiri kudzidzisa pamwe nekuumbiridza munhu kuti azove mutungamiri wemangwana sezvo izvi zvichizokonzera kusawirirana mubato ravo.
Mashoko aVaMugabe aya anopesana nemafambisirwo aiisiitwa zvinhu muZanu PF, sezvo hutungamiri hwaizivikanwa nekutevera muronga wehukuru mubato.
VaMugabe vanotiwo Zimbabwe ine mukana wekuramba muyananisi wainoona seari kurerekera kubato rimwe chete munhaurirano dzegakava reZimbabwe, idzo dziri kutungamirwa nemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma.
Semaonero avo, VaMugabe vanoti VaZuma vari kutungamira nhaurirano idzi kwete semutungamiri weSouth Africa, asi kuti semunhuwo zvake akazvimirira.
Asi mashoko aVaMugabe anopesana nezvakawiriranwa neAfrican Union, iyo yakapa SADC simbabwe rekugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe. Ukuwo SADC yakagara pasi iakawirirana kuti South Africa, nyika yakasimbisisa kuchamhembe kweAfrica, ive iyo inogadzirisa kupesana kuri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Izvi ndizvo zvakapa kuti VaZuma vave muyananisi pakati pevatungamiri vatatu vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa muZimbabwe.
Nhumwa yaVaZuma, Muzvare Lindiwe Zulu, varamba kutaura nezvenyaya iyi, vachiti inyaya yevatungamiri venyika.
Mukuru weYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe, VaSydney Chisi, vanoti mashoko aVaMugabe ekuti vachamirazve musarudzo anoratidza kuti vechidiki muZanu PF havazombofi vakawana mukana wekuve vatungamiri vemangwana.